Marka Dhaxal -sugaha Boqortooyada Sucuudiga iyo RW Spain ay wada hadlaan waxay noqon kartaa ganacsi UNWTO muhiim ah
24/7 eTV BreakingNewsShow : Guji badhanka mugga (bidixda hoose ee shaashadda fiidiyaha)
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Marka Dhaxal -sugaha Boqortooyada Sucuudiga iyo RW Spain ay wada hadlaan waxay noqon kartaa ganacsi UNWTO muhiim ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Doorka Sacuudi Carabiya ee Dalxiiska Adduunka, iyo Xarunta UNWTO ee ka soo guurista Spain una wareegeysa Sacuudi Carabiya ayaa laga yaabaa inay ahayd ajendaha ugu sarreeya taleefan maanta. Wicitaankii dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan iyo ra’iisul wasaaraha Spain Pedro Sánchez ayaa maanta fursad u siinaya mala awaalka mustaqbalka dalxiiska adduunka.
Sida lagu sheegay maqaal isku mid ah by Carab News iyo Wargeyska Saudi Maanta, dhaxal sugaha Boqortooyada Maxamed Bin Salmaan oo ka socda Sacuudi Carabiya ayaa la hadlay Raiisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez Isniintii.
Waxay ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Sacuudiga iyo Spain iyo sidii kor loogu qaadi lahaa.
Khubaradu waxay filayaan in mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya dooddan heerka sare ah ay ahayd qorshaha Sacuudi Carabiya ee soo jeedinta u guuritaanka Ururka Dalxiiska Adduunka ee RIyadh.
U -wareejinta Xarunta UNWTO ee Spain oo loo wareejiyo Sacuudi Carabiya wali kuma jirto ajendaha Shirka Guud ee UNWTO ee la qorsheeyay bisha Nofembar ee Morocco.
Inta badan waddamada xubnaha ka ah UNWO waa inay u codeeyaan soo jeedintaas.
Tallaabadan ma la joojiyay ama la bilaabay maanta, markii Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa la hadlay ra’iisul wasaaraha Spain Pedro Sánchez telefoonka?
Waxaa la ogyahay in arrimaha dalxiiska ee muhiimka ah aysan inta badan go'aamin wasiirada dalxiiska, laakiin ay go'aan ka gaaraan madaxda Qaranka ama heer madaxweyne.
Spain waa Xubin Fulineed oo joogto ah UNWTO. Haddii u -guurista Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay dhab noqoto, Sacuudi Carabiya waxay noqon lahayd xubin joogto ah. Tani waxay noqon doontaa tillaabo kale oo muhiim ah oo ka talisa dunida dalxiiska.
Dalxiisku waa warshad muhiim u ah Spain iyo Sacuudi Carabiya labadaba, laakiin shaki la'aan, Sacuudi Carabiya waxay u soo gurmatay qeybtan caalamiga ah intii uu socday masiibada adduunka iyada oo balaayiin la maalgaliyay lana qoondeeyay.
Sacuudi Carabiya waxay horey u martigelisay xarun goboleed UNWTO, oo ay weheliso xarun goboleed oo loogu talagalay WTTC.
Xubnaha UNWTO waa dalal ay matalaan wasiirada dalxiiska. Xubnaha WTTC waxay isu keenaan warshadaha gaarka loo leeyahay ee ugu weyn ee daneeyayaasha dalxiiska.
UNWTO waxay leedahay miisaaniyad aad u yar. Si loo hoggaamiyo warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ee caalamiga ah si looga baxo dhibaatada taagan waxay u baahan tahay miisaaniyad aad u weyn. Waxay kaloo u baahan tahay hab hoggaamineed oo ka wanaagsan goobta UNWTO.
Waxa loo arki lahaa dhawr sano ka hor wax aan suurtogal ahayn, ayaa hadda dhab noqon kara. Dalalka ku tiirsan dalxiiska ayaa quus ka taagan. Waxay noqdaan quus lacag iyo hoggaamin. Sacuudi Carabiya ayaa bixin karta labadaba.
Meel kasta oo uu ka soo muuqdo Wasiirka Dalxiiska Sucuudiga Axmed Al-Khatee, waa VIP-da koowaad. Adduunku wuxuu wacayaa 911, Sacuudiguna wuu ka jawaabayaa si joogto ah inta ay dhibaatadan jirto. Wasiirka Sucuudigu wuxuu ka qaybgalay shir kasta oo heer gobol ah oo UNWTO ah ilaa hadda.
Sidaas oo kale looma sheegi karo Spain. Kaliya markii Spain ay ogaatay halista dhabta ah ee ah inay weydo Xaruntii UNWTO, Spain waxay ka soo muuqatay guddigii gobolka ee Afrika ee dhowaan lagu qabtay Cabo Verde. Afrika waxay leedahay 54 dal oo madax -bannaan, kuwaas oo intooda badan u codeynaya xubnaha UNWTO.
eTurboNews bilaabay warbixin ku saabsan qorshayaasha lagu rarayo UNWTO bisha Luulyo. Maqaalkan, eTN waxay ku eedaysay in ka guuritaanka xarunta UNWTO ee Madrid ilaa Riyadh ay astayn doonto Dalxiiska Mareykanka.
Spain iyo dalal badan oo ka tirsan Midowga Yurub ayaan aad ugu faraxsanayn in Sacuudi Carabiya ay qaadato doorka muuqda ee dunida dalxiiska. Waxay ka soo horjeedaan wax walbam xuquuqda aadanaha ilaa Sebtember 11, marka laga leexdo ka -hortagga tallaabadaas oo ay Boqortooyada Sacuudi Carabiya si dublamaasiyadeed ah.
Dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee noocaas ah si kastaba ha ahaatee waxay ka ciyaareen labada dhinac. Sacuudi Carabiya waxay ka shaqeyneysay daafaha adduunka iyo gadaasheeda si ay ugu ololeyso qorshayaasheeda.
Baaqa maanta ayaa laga yaabaa inuu u dhexeeyo Ra'iisul Wasaaraha Spain iyo Dhaxal Sugaha Sacuudiga oo laga yaabo inuu ahaa baraf baraf.
Sida Spain iyo Sacuudi Carabiya ay u wanaajin karaan iskaashiga iyo xiriirka ayaa kaliya la qiyaasi karaa waqtigan xaadirka ah.
Waaxda Dalxiiska Jamaica ayaa wadata Dhaqaale Xoog leh ...
Dalxiiska Jamaica ayaa abaal -mariyay mutadawiciin reer Japan ah oo ka tirsan Olombikada ...
Boqortooyada Midowday (UK) waxay hadda kor u qaadday La-talinta Safarka ee Ka-hortagga Waxyaabaha aan Muhiimka ahayn ...
Xiddigga chess -ka Georgia ayaa dacwad ku soo oogaya Netflix markii ay ugu yeertay ...
Tallaalka alber alles: Dukaammada Hesse ee Jarmalka ...
United Airlines ayaa qorsheynaysa jadwalkii ugu weynaa ee gudaha ah tan iyo ...
Boeing si ay u dhisto nooc cusub oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee Australia
Magaalada New York ayaa qasab ka dhigaysa tallaalka COVID-19 dhammaan ...
Sri Lanka waxay ku socotaa xiritaan cusub iyadoo dhimashada COVID ay kor u kacayso
IATA: Kakan oo aad u badan sida xuduudaha dib loo ...
Hawlwadeenkii Duulimaadka Hawada ee Hawada ayaa la siidaayay ka dib markii ...
Kadib 20 sano oo baaritaan FBI ah ayaa ...
Atkins Kroll wuxuu ku biirayaa Barnaamijka Ballanqaadka Håfa Adai
Maaraynta qashinka COVID ee aan habboonayn waxay kordhin kartaa fayraska ...
Xayiraadaha Socdaalka Cusub ee booqdayaasha Hawaii
Dalxiiska Hawaii: Kharashka booqdaha ayaa hoos u dhacay Aloha State
Boqortooyada Midowday (UK) waxay dejineysaa xeerarka gelitaanka ajaanibta si buuxda loo tallaalay
IOC: Ciyaaraha Olombikada Xagaaga 2032 Waxaa Marti Galin Doona ...
Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu leh Hotelada Shan-xiddig ee ugu qaalisan ...
Aragtida UFO: Meelaha ugu Fiican ee Lagu Qabto Qof Aan La Aqoonsan ...
Dakar oo u socda New York City iyo Washington on Air Senegal ...
Ka ganacsiga dadka waa dambi caalami ah
Dhaqdhaqaaqa heshiisyada safarka iyo dalxiiska ayaa hoos u dhacay ku dhawaad ​​7%...
Arrinta xiisaha leh ee diiwaanka Seychelles In ka badan 100,000 ...
Khasaaraha aan Dib Loo Qaban karin: Liverpool ayaa laga xayuubiyay UNESCO World ...
Diyaaradaha United: More Jordan, Portugal, Norway iyo ...
Ha jebin sharciga markaad u safreyso Thailand: Waxaad ...
Madaxweynayaasha Nauru iyo Palau ayaa kala saxiixday ASA,…
Lambarada Rakaabka ayaa kusii kordhaya Madaarka Frankfurt
Safarka Beyond My New York City, Manhattan Zip Code
Jardiinooyinka Qaranka Uganda ayaa Dalxiisayaasha u fududeeya booqashooyinka
Dalxiisayaasha iyo dadka deggan waa inay muujiyaan tijaabada vax/negative ...
Bahamas waxay soo dhaweynaysaa safarrada cusub ee Crystal Cruises ...
Qubrus waxay Qasab ku Dhigtaa Imtixaannada COVID-19 Toddobaad kasta ...
JOOJI: 80 dal oo ay ku jiraan UK, UAE, France, Israel ...
Bahamas, Garaaca Wadnaha ee Dalxiiska ayaa u Dabaaldegaya Adduunka ...
Maldives hadda waa waddanka 128aad ee Dalxiiska Adduunka ...
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska ee Afrika ayaa dhambaalka Rajada ku faafiyay ...
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa daahfurtay Kooxda Dalxiiska Sacuudiga ...
Gobolka Hawaii ee ugu xun Mareykanka oo loogu tala galay xayawaanka u roon ...
Qorshooyinka Bullish-ka ee Ryanair Xagaaga 2022 Miyey Bixin Doontaa Dakhliga?
Wakiilada Socdaalka Mareykanka: Xeerarka socdaalka ee caalamiga ah ayaa isbedelaya ...
Alitalia airline: Waxay u xiran tahay ganacsi
Wasiirka Dalxiiska ee Seychelles ayaa sahamiyay ...
Marka saaxiibbadaada ugu fiican ay rabaan inaad hesho ...
730 jaakado iyo surwaal
Shirkadda P&O Cruises Australia waxay hakisay Sydney iyo ...
Correon wuxuu leeyahay,
September 20, 2021 at 13: 18
Tani waxay noqon doontaa, ma aha oo kaliya qalad laakiin argagax. Ma aha oo kaliya tani waxay noqon doontaa wax aan micno lahayn, laakiin wax -soo -saar leh.
Waxaa fiican inaad keligaa noqoto halkii aad ka ahaan lahayd shirkad xun.
Xitaa kama fikiri karo inaan u tago dalkan kulan khuseeya, inta aan u baqayo dadka halkaas ka shaqayn lahaa.
Waxaa laga yaabaa haddii ay i siiyaan 1 milyan oo Euro bishii, waxaan ka fiirsan doonaa inaan tago toddobaad.